ဒါကအထူးတစ်ခုပါ။ စတီဖင်ဟာသူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ပါ ငါ့သားဘီလ်။ စတီဖင်ဟာအလွန်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ သူကကျွန်တော့်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတဲ့အခါသူအိပ်မပျော်တဲ့ညဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်အကြောင်းကျွန်တော်သိသောအခါသူ့ကိုကူညီပေးရတာတကယ်ပျော်ပါတယ်
စတီဖင်၏ဘလော့ဂ်သည်ဂျာမနီသို့သွားသောကြောင့်နောက်နှစ်တွင်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသင့်သည်။ ဂျာမနီအမှန်တကယ်က၎င်း၏လူသိများသည် မရှိခြင်း ဘလော့ဂါများ ယဉ်ကျေးစွာယဉ်ကျေးမှုအရဆိုသော်တိုင်းပြည်သည်မီဒီယာအပြင်ဘက်တွင်လူမှုရေးနှင့်လူမှုမီဒီယာများအတွင်းပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမေရိကနှင့်အာရှမှသင်ယူရန်သင်ခန်းစာကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့မည့်အစားအခန်းတစ်ခန်းမှလူများကိုစာပို့ခြင်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းများပြုလုပ်လိမ့်မည်။
စတီဖင်၊ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ဟာဘယ်လောက်ကျယ်ဝန်းတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ချစ်ပါတယ် စတိုင်ကအရမ်းသန့်ရှင်းတယ် မင်းကတော်တော်တိတ်ဆိတ်နေတယ်၊ ​​ငါမင်းမှာနောက်တစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါမင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့ထိုးဖောက်ထိုးဖောက်မှုမှာမြင်ရပြီးမင်းနားထောင်တယ် ဆုံ! မင်းပုံရဲ့ရုပ်ပုံကိုချွတ်လိုက်ရင်မင်းအဲ့ဒီထိုးဖောက်တာကိုငါမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင့်တည်ရှိမှုကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးကြိုတင်စီမံထားသည့်အရာရှိသူများအားလူများအားသိစေရန်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်အလှဆင်နိုင်ရန်သင်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည် နှင့် တစ် ဦး ဖန်တီးမှု (အော်ဟစ်?) ခြမ်း။ 🙂
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် header ကိုနောက်ခံ image ကိုအတွက်အလှဆင်အချို့ကို? pownce မှာဒီနောက်ခံပုံကိုစစ်ဆေးပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြိုက်နှစ်သက်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သော်လည်း Digg အမှတ်အသားများကိုကျွန်တော်ထုတ်ယူချင်သည်။ သူတို့ကသင့်တော်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းမှာကြက်ဥ (သုည) တွေရှိတယ်။ ငါထင်တာကမင်းရဲ့ပို့စ်တွေကထပ်ထည့်တာထက်ပိုတာကြာတယ်။ သင်မှော်အတတ်တစ်ခုကိုရှာဖွေပြီး ၀ တွင်ဝှက်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၁ ထက်ကြီးသည့်အခါပြနိုင်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြသခြင်းအားဖြင့်စာဖတ်သူများအားဘလော့ (ဂ်) သို့မဟုတ်စာမူသည်အရေးကြီးသည်ဟူသောခံစားချက်ဖြင့်ပေးသည်။ သို့သော်အဆင့်အတန်းနိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိန်းဂဏန်းများရှိခြင်းသည်လူများအားစာဖတ်ခြင်း၊ စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုရန်အမှန်တကယ်တားဆီးနိုင်သည်။
ဒီ plugin ကိုအခြားတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည် ခုန်ဖြေ - လူတွေကိုပတ်ပတ်လည်မှာထားဖို့ငါအကြံပေးချင်တယ် Related Posts Plugin သင်၏ရေးသားချက်တစ်ခုစီ၏အောက်ခြေတွင်ဆက်နွယ်သောရေးသားချက်များကိုတင်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင့်အားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှရှာဖွေသူများသည်သင်၏ပို့စ်များကိုဖတ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သူတို့လိုအပ်သည်ကိုအတိအကျမတွေ့ပါကထိုအကြောင်းအရာနှင့်ထပ်တူဆောင်းပါးများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ဒါကလည်းနှင့်အတူကူညီလိမ့်မယ် နက်ရှိုင်းသောချိတ်ဆက်မှု ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်အတွက်။
သင်၏ရေးသားချက်များကိုပုံများနှင့်ခွဲခြားပါ။ စာမူများတွင်ပါသောရုပ်ပုံများသည်စာဖတ်သူများ၏အာရုံကိုဖမ်းစားလေ့ရှိသည်၊ ပုံကောင်းတစ်ပုံကိုရှာဖွေ။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်တင်လိုက်ခြင်း၏ပြtheနာကိုကျော်ဖြတ်ပါ။ ငါအထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့ Must Download ပို့စ်များကိုအပေါ်ဤသို့ပြုလိမ့်မယ်! ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏မျက်နှာပြင်ပုံသို့မဟုတ်တံဆိပ်သည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ blog post ခေါင်းစဉ်များရဲ့ font-weight ကိုဆန်းစစ်ဖို့လည်းလိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုစကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေါင်းစဉ်တွေကိုကိုယ့်ဘာသာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးတယ်။
အိုး - ကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူသောအမှားတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သင်၏ robots.txt ဖိုင်သည် sitemap ကိုညွှန်ပြနေသည်။ သတင်းကောင်းကတော့သင့်မှာမြေပုံအညွှန်းရှိသည်! သတင်းဆိုးမှာဂူးဂဲလ်သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကို၎င်းမပါဘဲထိထိရောက်ရောက်ရှာဖွေနိုင်မည်မဟုတ်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတခု…သင်တင်လိုက်တဲ့တင်ပို့ချက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုခုကြည့်နေတယ်။ တစ်ခါတလေ HTML မှ code ကိုကူးယူတဲ့အခါမှာရှုပ်ထွေးပါတယ်။
ခံစားပါ, စတီဖင်! ငါတကယ်ခက်ခဲကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်၏ site ကိုဝေဖန်ခဲ့ကြရသည်။ သင်ကစိတ်ကူးကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်။
Tags: နောက်ခံပုံcoleyDiggplugin ကိုဆက်စပ်ရေးသားချက်များစက်ရုပ်srcoleystephen coley
6:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 50
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစ်တန် Doug! ငါသည်ငါ့ပို့စ်တွင် link ကို fixed ။ ဒါဟာကိုးကားအမှတ်အသားများနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားရဲ့ဝေဖန်မှုအတွက်ကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်အကြောင်းအရာများသိပ်မရှိသေးကြောင်းသင်သတိပြုမိပေမည်၊ သို့သော်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်ဤအလုပ်များအားလုံးကိုလုပ်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်စေသင့်သည်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ။ ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုအခြားမည်သူမဆို၏တင်ရန်ချင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
6:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 40